Soo Iibso Sexy Laba Qaybood Oo Calan adag oo Jidhkoodu sarreeyo & Dharka Jirka ee loo yaqaan 'Bodycon Midi Skirt' - Maraakiib Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Sexy Two Piece Set Solid Dalag adag & Bodycon Midi Skirt
$ 32.99 qiimaha joogtada ah $ 58.99
Color Orange lavender Casaan kulul Neon Green Neon Yellow Blue
S / Orange L / Lavender S / lavender M / Casaan kulul XL / Casaan kulul L / Neon Cagaar S / Neon Cagaar M / Lavender XL / Lavender L / casaan kulul S / kulul casaan ah J / Neon Jaale XL / Buluug Jaale Neon L / Buluug M / Neon Cagaar M / buluug XL / Neon Cagaar S / buluug XL / Liin dhanaan L / Liin dhanaan M / Neon Jaale M / Orange XL / Jaale Neon
Sexy Two Piece Set Dalag adag oo adag & Bodycon Midi Skirt - S / Oranji gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Number Model: LS032
collar: Collar Square
Mudada dhererka (cm): Dhererka buuxa
Ku nool si taxaddar leh oo daacadnimo ah, waxaan u qaaday sawirradaydii ugu fiicnaa oo ay ku kacday halkii rodol midkiiba
Sawiradan ma yeelaan wax cadaalad ah. Waa mid aad u qurux badan gaar ahaan midabkani. U eeg si qurux badan maqaarka maqaarka. Ma sugi karo inaan xidho. Dhab ahaantii waa run runtii sidoo kale. Hore u soco oo hel, xaqiiqdii uma qoomamoon doono.
Waxay u egtahay sidii galoofis Xariga xargaha hore ee cuz wuxuu iila muuqdaa midxiis. Shixnadu waxay ahayd hal toddobaad ama labo toddobaad oo si fiican ayaa loo wada xidhiidhay. Waan jeclahay oo waan ku talinayaa!
Waan jeclahay Waxay umuuqatay inay yar tahay bacda laakiin si fudud ayaan u galay. Waan jeclahay midabka waana qaro weyn. Dhab ahaantii waa u qalantaa !! Waxaan lumiyay xoogaa xoogaa miisaan ah waxaanan qorsheynayaa inaan dhinto intaa ka badan tanina way shaqeyn doontaa xitaa kadib miisaan dhimista.
sifiican buu u habboonyahay, waxaan dhexda u xirtay dhabarka maxaa yeelay ma jecli dhanka hore sida ugu badan lol